Jinsifaquuqa, fasaxa waalidka iyo xaqa urur ku mid noqoshada - Arbetsmiljöverket
Jinsifaquuqa, fasaxa waalidka iyo xaqa urur ku mid noqoshada
Waa in aan marnaba lagu takoorin
Shaqa-bixiyuhu waa in uusan dadka kala takoorin
Dhibaatooyinka goobta shaqada waa in la baaraa oo wax laga qabtaa
Sidaan ayaad u soo sheegeysaa
Sidaan ayuu u shaqeeyaa sharciga fasaxa waalidka
Hooyooyinku waxay xaq u leeyihiin fasax
Mamnuuca in qof hab xun loo la dhaqmo
Ma uur ayaad leedahay, ilmo ayaad dhowaan ummushay ama waa nuujisaa?
Xaqa in urur xubin laga noqdo, xaqa wadahadalka iyo nabadda wadaxaajoodka suuqa shaqada
Dalka Iswiidan qofna lama takoori karo. Taas micneheedu waxa weeye in aan qofna loo faquuqin sababahaan:
Lab ama dheddig
Dhaqan ama muuqaal lab ama dheddig ahaan
Diin ama aamminaad kale
Habka uu u galmoodo
Waa mamnuuc in qof la dhibo ama lagu cadaadiyo waxyaalo galma-doon u muuqda. Cadaadisku wuxuu noqon karaa dhaqan lagu bahdilayo qofka qiimihiisa oo la xiriira sababaha takoorka oo kor ku xusan. Cadaadiska galmo-doonka waxaa looga jeedaa dhaqan faraxumayn ah oo bahdilaya sharafta qofka.
Cid shaqada bixisaa waa in aysan takoorin qof
U jooga in uu fuliyo shaqo loo soo kireystay ama amaahday.
Laakiin waxaa lagu la dhaqmi karaa hab ka duwan dadka kale, haddii ay taasi muhiim u tahay in la gaaro ujeeddadii sharciga, tusaale ahaan haddii la doonaya in la isu dheellitiro ragga iyo dumarka. Laakiin si geddisan u la dhaqmiddu waa in aysan saamayn shuruudaha mushaharka iyo habka shaqada.
Haddii shaqada lagugu dhibo ama faraxumeeyo, waa in cidda aad u shaqaysaa ay arrinta baartaa. Cidda aad u shaqayso waxaa ku waajib ah in ay qaaddo tallaabooyinka loo baahan yahay oo wax looga qabanayo dhibtaas ama faraxumayntaas si aysan mustaqbalka u dhicin. Waajibaadka shaqabixiyuhu waxay khuseysaa dhammaan shaqaalaha, xataa kuwa fulinaya shaqooyin loo soo kireystay ama amaahday.
Waa mamnuuc in shaqabixiyuhu kugu sameeyo aargudasho haddii aad:
Soo sheegtay in cidda aad u shaqaysaa ay u dhaqantay hab sharciga ka baxsan,
Aad ka qaybqaadatay baaritaan sida sharciga waafaqsan
Diidday ama oggolaatay dhib ama faraxumayn shaqabixiyuhu kuu geystay.
Mamnuucaas wuxuu kaloo khuseeyaa qofka shaqo ama tababar shaqo doonaya ama qofka u yimid inuu fuliyo shaqo loo soo kireystay ama amaahday.
Sharciga takooridda waxaa ka mid ah xeerka mamnuucaya in la takooro qof waqti gaaban ama xaddadan shaqeeya.
Jebinta sharciga takooriddu wuxuu keeni karaa in ay shaqabixiyaha waajib ku noqoto inuu bixiyo magdhaw la siiyo qofka dhibta ama faraxumaynta loo geystay.
Halkaan ka akhriso sharciga takooridda
Haddii aay dooneyso in aad dacwo takoorid u soo gudbiso wakiilka ka hortagga takoorka Diskrimineringsombudsmannen, DO, oo raacaya sharciga ka hortagga takoorka.
Waa lacag la’aan in dacwo loo soo gudbiyo DO, wakiilka DO wuxuu bixiyaa talooyin ku saabsan habka dacwooyinka takoorka loo qoro oo loo diro. Haddii wakiilka DO uu u arko in qofka lagu sameeyey xadgudub takoor ah, kolka wakiilka ayaa qofkaas matala maxkamadda horteeda.
Halkaan ayaad heleysaa bogga internet-ka ee DO:
Sharciga iswiidhishka ee fasaxa waalidka ayaa lagu maamulayaa dadka shaqada loo soo diray. Waxaad xaq u leedahay fasax waalid kolka ilmo kuu dhasho, mana aha in si dadka ka duwan laguu la dhaqmo. Waxaa jira xeerar ama tallaabooyin lagu ilaaliyo dumarka uurka leh ama dhowaan ummulay.
Haddii aad qof dumar ah tahay oo aad shaqayso, waxaad xaq u leedahay fasax kolka aad ummusho. Waxaad xaq u leedahay fasax ugu toddoba toddobaad ah oo laga soo bilaabo maalintii aad ummushay.
Cidda aad u shaqaysaa kuu la ma dhaqmi karto hab ka duwan dadka kale kolka aad shaqo dooneyso fasaxa waalidnimada kadib. Waa mamnuuc in marnaba lagu dulmiyo, ha ahaato shuruudaha mushaharka ama shaqada, qaybinta shaqada, dalacsiinta ama shaqada ka joojinta. Mamnuucidda lagu dhaqmayo kolka shuruuduhu ay muhiim u yihiin fasaxa waalidka.
Haddii shaqada lagaa ga cayriyo fasaxa waalidnimo awgiis, kolka shaqo ka cayrintaas sharci ma aha oo waa la joojonayaa haddii aad adigu codsato.
Haddii aad dhowaan ilmo ummushay ama aad nuujiso, waxaad xaq u leedahay in laguu beddelo shaqo kale si aadan u waayin faa’iidooyinka shaqada. Sababtu waxay noqoneysaa in aadan fulin karin shaqadii caadiga ahayd, sida inaad ku shaqayso maaddooyin khatar keeni kara ama shaqo xoogga jirka la isticmaalayo.
Xaqa in shaqo kale lagugu wareejiyo ma aha mid kama dambays ah. Haddii cidda aad u shaqaysaa aysan heli karin shaqo kale, markaa wareejintaasi suurtagal ma noqoneyso. Waxaa kolkaa xaq u yeelan kartaa in aad fasax qaadato in aad u ilaaliso caafimaadkaaga iyo ammaankaaga.
Haddii aad dooneyso in shaqo kale laguu beddelo, waxaa codsi u gudbineysaa cidda aad u shaqayso. Haddii aysan suurtagal hayn in shaqo kale laguu beddelo, kolkaa waxay cidda aad u shaqaysaa si joogta ah u eegeysaa in ay jiraan sababo shaqo kale laguugu beddeli karo.
Haddii shaqabixiyuhu uu jebiyo sharciga waxaa waajib ku noqon kara in magdhaw siiyo qofka shaqaalaha ah.
Halkaan ka akhriso sharciga fasaxa waalidka
Xafiiska Försäkringskassan wuxuu bixiyaa warbixino ku saabsan fasaxa waalidka
Waxaad xaq u leedahay in aad ka qaybqaadato wax ka go’aaminta nolosha shaqada oo ay ka mid yihiin Xaqa in urur xubin laga noqdo, xaqa wadahadalka iyo nabadda wadaxaajoodka suuqa shaqada.
Xaqa xubininamda urur waxaa laga wadaa in xaq laga noqdo urur shaqaale oo laga faa’iideysto xubinimada, loona doodo ururkaas. Wana in aan la jebin xaqa xubinimada urur. Taas micneheedu waxa weeye in dhibaato kaaga soo gaarin (tusaale shaqada lagaa cayriyo) xubinimada ururka shaqaale awgiis.
Xaqa wadahadalka wuxuu maamulayaa xaqa ay ururada shaqaaluhu u leeyihiin in ay la xaajoodaan shaqabixiyayaasha/ururada shaqabixiyayaasha oo kala xaajoodaan arrimaha ku saabsan xiriirka ka dhexeeya shaqaalaha (oo xubin ka ah ama ka soo ahaa ururka shaqaalaha) iyo cidda shaqada bixisa.
Kolka ay wadajir u heshiiyaan shaqabixiyayaasha iyo ururada shaqaale waxaa dhexmaraya waajibaad nabadeed. Kolka ma ay isticmaali karaan tallaabooyin dagaal, sida shaqajoojin, inta heshiiskaasi dhaqangal yahay.
Haddii la jebiyo xeerarka zaqa in urur xubin laga noqdo, xaqa wadahadalka iyo nabadda wadaxaajoodka suuqa shaqada waxaa waajib noqonaya in magdhaw la bixiyo.
Halkaan ka akhriso sharciga isla shaqaynta